Adobe Flash Player 11.3.300.268 ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Adobe Flash Player 11.3.300.268 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိရင်အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ...! IE & Firefox နှစ်ခုလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အဆင်ပြေလိမ့်မည့်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာ MediaFire လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
" IE အတွက်ယူရန်..." ( 8.81 MB )
" Firefox အတွက်ယူရန်..." ( 9.37 MB )
No Response to "Adobe Flash Player 11.3.300.268 ...!"